17+ Brynhildr mahery amin'ny maizina (miaraka amin'ny sary) - Hafa
17+ Brynhildr lehibe indrindra amin'ny maizina milaza ho tianao
Brynhildr ao amin'ny teny maizina nalaina avy amin'ny endri-tsoratra anime:
Brynhildr ao anaty aizina dia andian-tantara mihetsika sci-fi, novokarin'i studio arm. Studio mitovy amin'i Elfen Lied sy Maou Yuusha.
Andao hifantoka amin'ny fakana ireo teny nalaina indrindra sy manan-danja indrindra amin'ity anime ity. Ary manome zavatra hifandraisanao.
Na mpankafy ianao na tsia dia ireto ny teny miabo tsara indrindra amin'ny fampisehoana.
'Zavatra adalana izany, ny fon'ny olombelona. Indraindray isika dia tsy mahavita miasa lozika, ary mihetsika amin'ny fihetsem-po. ” - Ichijiku Chisato
'Famonoana ny hevitrao manokana… na ny jiolahin-tsambo aza dia mahavita an'izany raha mamono olona tsy fantatrao tanteraka izy. Na izany aza, zavatra hafa tanteraka izany raha ny amin'ny famonoana havana na namana. Ny faniriana irery tsy ampy. Mila finiavana tsy voahozongozona sy finoana tsy miovaova ianao. ” - Ichijiku Chisato
'Marina, fa hiaraka aminao foana aho mandra-pahatongan'ny fahafatesana hisaraka ... Ka… Aza mora maty.' - Ryouta Murakami
3. Teny Neko Kuroha
'Nomenao ny herinao izahay fa manana hery izahay afaka mampindrana anao koa.' - Neko Kuroha
“Halako indrindra i Murakami !! Matetika izy… mandainga amiko… ary avy eo amiko… very ny fahatsiarovany… halako koa izy. ” - Neko Kuroha
'Onee-chan, ho mankaleo raha manohitra anao amin'ny kilemaina toy izany aho. Alohan'ny hahantonako… dia hamely anao hatrany hatrany aho mandra-pivoak'io toetranao miolakolaka io. Tsy maintsy vonoiko ianao… Raha mbola tsy mandeha izany. ' - Neko Kuroha
“Hafahafa be ve ny manao zavatra amin'ny olon-kafa? Raha afaka mitsiky mitsiky rahampitso ny olona tiako… dia azonao antsoina hoe adala aho na izay tianao. ” - Takatori Kotori
seho anime tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra
“Tsy mitovy lanja velively ny fiainana. Misy hatrany ny filaharana. ” - Mako Fujisaki
'Tsy very eto amin'ity tontolo ity ny olona amin'ny fotoana hahafatesany. Ny tena fahafatesan'izy ireo dia rehefa hadinon'ireo velona izy ireo. ” - Tokou Nanami
'Tsy maninona na velona aho na maty. Tsy misy mahalala ny fisiako, ary tsy manana namana tokana aho. Saingy… raha tsy manadino ahy ianareo rehetra… dia ampy izay na dia maty aza aho. Amin'izay… ho velona bebe kokoa noho ny taloha aho. ” - Tokou Nanami
“Ireo izay omena fahefana lehibe dia hahafoana ny fifehezan-tena rehefa eo amin'ny malemy. Tsy manomboka simba ny voasary. Ilay kaontenera no mahatonga azy ireo ho lo. ' - Onodera
'Aza adino, ny fisiantsika dia marefo sy tsy azo antoka, fantatsika fa mety ho faty amin'ny fotoana rehetra isika. Ao anatin'ity fotoana fohy ananantsika ity, isika rehetra dia samy manana faniriana iray na roa tianay hotanterahina. Ny fahaverezan'ny faniriana lehibe indrindra… dia toy ny famoizana ny antom-pivelomanao. ” - Wakabayashi Hatsuna
“Mora mamadika ny hafa ny olombelona. Izany no toetran'izy ireo. ' - Wakabayashi Hatsuna
9 . Fanononana Yuuta Murakami
“Olona adala ihany no manandrana manamarina ny fihetsem-po.” - Yuuta Murakami
“Mifantina vehivavy mifototra amin'ny fihetsem-po ny lehilahy. Na misy antony aza dia faharoa ihany. Na izany aza, ny vehivavy dia mifantina lehilahy mifototra amin'ny antony. Na amin'ny zavatra toa ny laharam-pianarany na ny toerany eo amin'ny fiaraha-monina. ” - Yuuta Murakami
“Rehefa malahelo ianao… mitsikia, na dia mila manery tena aza… Raha mitomany ianao rehefa maharary… vao may maharary.” - Chie
11. Fanononana Kazumi Schlierenzauer
'Tsy miantso namana ny olona raha vao mahatsiaro anao fotsiny. Mpinamana ianao satria mifankatia. ” - Kazumi Schlierenzauer
Ny lisitra lehibe indrindra amin'ny teny nalaina kanana mendrika zaraina
Vondron-tsarimihetsika Bungaku Shoujo ho an'ny mpankafy ny sarimihetsika
anime 10 ambony indrindra amin'ny fotoana rehetra